सावधान ! बाथरोगको उपचार समयमै नभए शरीरका धेरै अङ्गलाई यस्ता असर पुर्‍याउने – Medianp
सावधान ! बाथरोगको उपचार समयमै नभए शरीरका धेरै अङ्गलाई यस्ता असर पुर्‍याउने
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: आइतबार, पुष २९, २०७५१२:१४0
बाथ रोगलाई जोर्नीसगँ सम्बन्धीत रोगको रुपमा लिइएको छ । बाथ रोगलागेपछि मानिसको रोप्रतिरोधात्मक क्षमता बिस्तारै घटाउदै जान्छ । यस रोगलाई जार्नीसगँ सम्बन्धीत रोगको रुपमा लिएपनि यसले मासंपेशी, चर्म, मुटु, मृगौला, फोक्सो, मस्तिष्क लगायतका महत्वपूर्ण अगंलाई असर पारेको हुन्छ
जोडोयाममा बाथ रोग लागेका मानिसलाई बढी समस्या देखिने कारणले चाडोयाममा सजगता अपनाउँनुपर्दछ । बाथरोग कसरी लाग्दछ, यसको रोकथाम कसरी गर्ने, लागेपछि कसरी उपचार गर्ने भन्ने बारेमा प्रभावकारी जानकारी हासिल गर्न सकेमा यो रोगबाट बच्न सकिन्छ ।
के हो त बाथ रोग ?
बाथ रोग यस्तो रोग हो, जसले शरीरको एक कोषिकाले अर्को कोषिकालाई हानी गर्दछ, सुरुवातमा यो रोग लागेपछि हाडजोर्नीको समस्या देखापर्दछ भने यसले शरीरलाई निरन्तर रुपमा पिडा दिइरहेको हुन्छ । विशेषगरी महिलाहरुलाई लाग्ने यो रोग बालबालिका, पुरुष तथा बृद्धाबृद्धहरु पनि हुन्छ ।बाथरोग वशांणुगत हुनसके पनि सरुवारोग भने चाहि होइन् । उक्त लागेपछि हात खुट्टाको सनासाना जोर्नीहरु दुख्ने, सुनिने लगायतका यस्ता लक्षणहरु देखापर्दछन् ।
१. हात खुट्टाको औलाहरु विस्तारै बांगिदै जाने र जोर्नीहरु नचल्ने ।
२. आँखा तथा फोक्सोलाई असर पार्ने ।
३. बाथ रोगको प्कार अनुसार लक्षण देखापर्ने कारणले गर्दा कुनै बाथ रोगमा जोर्नी, मांसपेशी दुख्छ भने कसर्न बाथरोग लागेमा आँखा मृगौला फोक्स लगातका महत्वपूर्ण अंगमा असर देखा पर्दछ ।
बाथरोग मात्र भनेर पनि हुदैन्,बाथरोग धेरै खालका हुन्छन्, ती मध्ये धेरैलाई गठियाँ बाथरोग हुन्छ । गठियाँ बाथरोग लागेपछि बिहानको समयमा धेरैने दुखाई हुन्छ । आराम गर्दा यो रोगले मानिसलाई धेरै पीडा दिने गर्दछ भने शरीरलाई चलाएमा पीडा वा दुखाई कम हुन्छ ।
किन लाग्छ ?
वंशाणुगत र विभिन्न किसिमको संक्रमणको कारणले गर्दा यो रोग लाग्ने कुरा पत्ता लगाइएको छ । विशेषगरी यो रोग धुम्रपान तथा सूर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्ने मानिसलाई लाग्ने गर्दछ । गठियाँ बाथ रोगपछि अर्को धेरै देखिने बाथ रोग भनेको मेरुदण्डको बाथ रोग हो । यस्तो खालको बाथ ४० भन्दा कम उमेरका परुषहरुलाई देखापर्दछ, जसले गर्दा ढाड दुख्ने, बिहान उठ्दाशरीर कक्रिने, पाता दुखिरहने, सुत्दा गोल्टे फर्कने असहज हुने जस्ता समस्या देखापर्दछ । यस्तो रोग बाथ आन्द्रामा हुने ….र …. भन्ने रोगको कारणले लाग्ने सम्भावना पनि रहेको छ, यसबाहेक पिसाबमा सकंमण भएमा वा झाडापखाला लागेमा मेरुदण्डमा बाथ हुनसक्दछ, यस्ताो रोग लागेपछि आँखा एकदमै रातो हुने, आँखाको ज्याती कम भई आँखा देख्नमा समस्या सिर्जना हुन्छ ।
चिसोमा बाथरोगको बिरामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने कारणले सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ, किनकि यो मौसममा वातावरणको तापक्रम र प्रेसरको प्रभावको कारणले फोक्सोमा असर देखापर्दछ । बाथरोग एउटा दीघ रोग हो, लागेपछि नियमित रुपमा औषधी सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नियमित रुपमा समयमै औषधी सेवन गरेमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, उचार व्यक्ति अनुसार फरक हुन्छ भने खानपानमा यो रोग लागेका मानिसहरुले बार्नु पर्दन् तर डाक्टरको सल्लाह भने लिनुपर्दछ । युरिक एसिड भएका बिरामीलाई ‘गाउँथे आरथ्राइसिट’बाथ लाग्ने सम्भावना अधिक हुन्छ । रगतमा युरिक एसिडको मात्रा धेरै भएमा ‘गाउँटे आरथ्राइसिट’ नहुन सक्छ भने एसिडको मात्रा सामान्य हुदाँ ‘गाउँटे आरथ्राईसिट’ बाथ हुनसक्दछ । युरिक एसिडका कणहरु जोर्नीमा पुगेर अर कोषिकालाई असर पार्न थालेपछि जार्नी दुख्ने, सुनिने जस्ता समस्या देखापर्दछ ।
यो बाथ मधुमेह, उच्चरक्तचाप, मोटोपनाको समस्या, मृगौलाको बिरामी भएकालाई बढि हुन्छ । युरिक एसिडलाई नियन्त्रण गर्नको लागी नियमित व्यायम स्वस्थकर खानेकुरा खानुपर्दछ भने रातो मासु, चिनी भएको पेय पदार्थ, धुम्रपान र सूर्तिजन्य पदार्थको सेवन गर्नुहुदैन् । फलफूल, तरकारी, दुधदही युरिक एसिड भएका बिरामीका लागि एकदमै फाइदाजनक छ ।
जान्नुहोस् ! यसकारण हुन्छ भक्कभकाउने समस्या ! समस्या समाधान गर्न यसो गर्नुहोस